UZahara usola abasondelene naye ngokungcolisa igama lakhe | isiZulu
UZahara usola abasondelene naye ngokungcolisa igama lakhe
Durban - Emasontweni edlule, elinye lamaphephandaba angeSonto lishicilele udaba oluthi lesi sihlabani somculi sicwile ezikweletini, kwathiwa ngenxa yokuxakeka, sesiyehluleka wukukhokhela imoto yaso yohlobo oluphambili, nomuzi.
Ekhuluma neLANGA LangeSonto uZahara uthe akumethusi neze lokhu okusabalala emaphephandabeni ukuthi unezikweletu. Uthe uyabazi abantu abasabalalisa lawa mahlebezi angamampunge. Uthi kunabazama ngakho konke okusemandleni ukudicilela igama lakhe phansi.
"Lokhu kuyitulo lokungiwisa. Leli tulo lenziwe ngabantu abazitshela ukuthi ngeke ngibe yilutho ngaphandle kwabo. Abakhohlweke ngoba mina ngingowaNkulunkulu," kuchaza uZahara obedinwe egane unwabu.
Uyihlaba uyayihlikiza eyokuthi uxakekile, uthi akanayo nencane inkinga yemali. Uqhube watshela leli phephandaba ukuthi kuyimanje abameli bakhe bamatasa bacubungula lolo daba athi lushicilelwe ngaphandle kobufakazi.
Okunye athe kuyamhlukumeza kakhulu wukuthi kunabantu abamfonelile bathi bafuna ukuyomshutha kwakhe, kodwa uma esebalindele bajika esithubeni.
"Iyacasula le nto yokuthi abantu bafune ukukopolota okungekho bethi bafuna ukwazi ukuthi ngisenayo ngempela yini imali. Kade ngifonelwe ngabantu abathe bavela kwiTop Billing, bathi bacela ukuzongishutha emzini wami. Ngithe sengibalindele base beyafona bathi kukhanseliwe," kuchaza yena.
Uthe uyasola ukuthi labo bantu abebefonile bebethunyiwe ukuba bayobheka ukuthi usahlala kuwona yini umuzi noma imoto isekhona yini.
OLUNYE UDABA:UZahara uphika eyokukhulelwa neyomshado
Utshele leli phephandaba ukuthi kumcacele bha ukuthi kunabantu abangalali, bazikhathaza ngempilo yakhe. Ebuzwa ngokuhlakazeka kweTS Records okuyinkampane eyamveza ebantwini, uthe kumcacele ukuthi bese kunguyena qobo iTS, ngoba uthe ehamba yahlakazeka.
"Nami bengingazi ukuthi sebehlakazekile. Kuyacaca ukuthi ibisibanjwe yimina kuphela, ngoba ngithe ngiphuma nje akekho omunye umculi ophinde waqopha ngaphansi kwayo," kuchaza yena.
Uthe akanankinga nomndeni wakwaNcinza okunguTK noNhlanhla Ncinza. Uthe usabathatha njengabazali bakhe kodwa uma kuziwa emsebenzini kabahlangani.
Kuyimanje uZahara umatasa nokuhlanganisa i-album yakhe ezophuma ekupheleni kwalo nyaka. Uthe ufuna ukuthungatha umdidiyeli osemusha bese ehlanganisa nalabo okade esebenza nabo uMojalifa, Thebe kanye noRobbie Malinga.